Uma iminyaka yobubeletha iba ngaphezulu futhi iseduze ukukhululwa, abesifazane abaningi baqala ukukhathazeka ngokubeletha ngaphambi kwesimiso. Kulo mhlaba, noma yikuphi ukunyakaza kwe-fetus noma ukuzwa okusha kubonakala sengathi yisikhathi lapho ukulwa kufanele kuqale. Ngakho izinsuku zidlule kanye nesonto elilodwa ngaphezulu, futhi isimo sihlala esidlule, ubuhlungu obuyimfanelo yesikhathi sokubeletha futhi kufanele kube njalo, alubonakali nganoma iyiphi indlela.
Ngokuqinisekile kukhona abesifazane abazolile, uzocabangela ngesonto, ngeke ngigqoke indlovu unyaka nonyaka, umzuzu uzofika, futhi wonke uzovela. Kodwa isimo nemibandela yokugcina yokukhulelwa ihlukile, akufanele, ungesabi ukwesaba, kodwa awukwazi ukungabi nandaba nakho noma kunjalo. Ikheli kumdokotela, futhi uma usuvele unomdlavuza wegazi futhi uthi leli gama selikhokhwa kakade futhi ukuzalwa kufanele kudingeke kuthiwe, ke ungayeki futhi ungayiluleli. Kufanele kucatshangelwe ukuthi uma ingane isaphezu ngokweqile, ingane ingabhekana nanoma yiziphi izinkinga zomzimba, kukhona futhi isongo empilweni yakhe.
Ngakho-ke kukhona okuthinta noma cha?
Iqiniso liwukuthi ukukhulelwa kunezinhlobo ezimbili zokubala, futhi zombili zizobonisa imigomo ehlukile. Isikhathi sokukhulelwa ngomqondo ojwayelekile singaba nomhlahlandlela owandisiwe, isb. i-countdown yamaviki angu-40 iqala kusukela ngosuku lokuqala, lapho ukuphela kokuya esikhathini. Lokhu kutholakala amasonto angu-38 kusukela ngesikhathi sokukhulelwa, kulesi sikhwama ngokuvamile kufaka ngaphezulu kwe-nedeliplyus noma ngaphezulu. Kodwa kusukela ukukhumbula kahle lolu suku olujabulisayo, njengoba umthetho ungasebenzi, khona-ke ukulethwa kulindeleke esikhathini samasonto angu-40.
Ngokuphambene nenkolelo evamile, ukuzalwa ngeviki 37 akuyona into eyayiqala, njengoba nje ukuzalwa kuka 42 kungabhekwa njengasekupheleni kwesikhathi. Futhi kuzo zombili izimo, ingane ibelethwe kahle kahle futhi iphilile, akukho izinkinga zokudluliselwa emavikini angu-42 avuki. Ukukhulelwa isikhathi eside kunomuntu ohlala amasonto angaphezu kwangu-42, icala elifanayo lingavamile kunokugqoka, kodwa ungakhathazeki okuningi. Phela, umzimba ufana nowesifazane futhi isikhathi sokukhulelwa sihlukile, nemingcele yayo.
Indlela yokunquma kahle le mingcele?
Uma ujikeleza kusukela ngosuku lokuqala kusukela ekuqaleni kokuya esikhathini ukuya ekuqaleni kosuku lokuqala olulandelayo kungaphezu kwezinsuku ezingu-28, ukugqoka amaviki angu-40 kuzoba okujwayelekile. Kumele futhi uqaphele ukuthi zonke izinsuku ezongezwe ekubalweni okunjalo komjikelezo, unikeza inkululeko ekwesabeni ukuphindaphinda, kungaba ngamaviki angaphezu kuka-40 ngokuthula. Uma kwenzeka umjikelezo ongaphansi kwezinsuku ezingu-28, isikhathi sokubeletha esiphezulu sizoba amasonto angu-36-40.
Kukhona amaphuzu abalulekile, ngenxa yokuthi ukukhulelwa okungaphila, isibonelo, lapho ezinyangeni zokuqala ukukhulelwa kwakukhona izinkinga, njengombuso, ngezikhathi ezinjalo umntwanakho akatholi ukuthuthukiswa okudingekayo, ngakho-ke kuthatha isikhathi esincane. Kanti kungenzeka ukuthi umuntu ohamba emgqeni wesifazane wesikhathi esizayo unenkinga efanayo nokulibaziseka kwamaviki angaba ngu-40, lokhu kungathathwa njengefa. Ngaphezu kwalokho, umzimba ungenza izimangaliso, isibonelo, i-biorhythm enefa noma isimo, lokhu kuthinta kakhulu kokubili ukuthuthukiswa kwe-fetus kanye nokuzalwa kwesikhathi. Isibonelo, emicabangweni yakhe owesifazane wayefisa ukubeletha lapho umyeni wakhe evela ohambweni lwebhizinisi ukuba abe naye, futhi umzimba ungakwazi ukuzivumelanisa ngqo nale nkinga yengqondo.
Incazelo ecacile yokukhokha ngaphezulu
Yiqiniso, kunezimo lapho kubhekwe khona ukubeletha ngokucacile, kulokhu kubalulekile ukuqala ngokuphuthumayo ukuzala, kodwa ngendlela yemvelo lokhu ngeke kwenzeke maduzane. Yini engabambezela ukuzalwa futhi ngesikhathi esifanayo inikeze ukuqonda okucacile ukuthi kune-perenashivanie?
Uma inani lama-amniotic fluid seliyehlile, umsebenzi wokubeletha ungase ube buthakathaka noma ungabikho ngokuphelele.
Futhi i-bubble flat, leyo ekhanda leseli, ingaphazamisa ukuvulwa komlomo wesibeletho futhi iphuze ukulethwa.
Uma umntwana usuvele esungule amathambo aminyene kakhulu we-skull esibelethweni, ama-fontanel kanye namasutheni amancane avimbela ukuba bangaguquki ekuphumeni, ngakho-ke kunzima ukuqala ukuzala, futhi inqubo yokulethwa izodinga imizamo emikhulu.
Uma le nkulumo isivele isivele emavikini angu-40, kanti umlomo wesibeletho awukavuthi, khona-ke lokhu kubonisa ukuthi ukukhulelwa kuzolibaziseka.
Uma i-ultrasound ibonisa ukuthi ku-amniotic fluid ayikho i-lubricant efana namanzi futhi i-fetus inesikhumba esomile, khona-ke lokhu sekuvele kunamandla kakhulu.
Uma i-placenta ikhula futhi lokhu kubonakala ku-ultrasound, kusho ukuthi kune-overtaxation futhi i-placenta ngeke isheshe ikwazi ukunikeza ukukhula nokuphila.
Uma i-yimbo ikhombisa ukutholakala kwamathumbu emathumbu emanzini, kulokhu ingane izoba ne-oksijeni yindlala.
Kungani kukhona impumuzo ?
Kubalulekile ukuqonda ukuthi yiziphi izici eziyisisekelo ezithinta ukukhiqiza ingane.
Uma kwenzeka udokotela owedlula ngokweqile, odokotela banezincazelo ezimbalwa zezincazelo, kodwa babilisa ukuthi umama akakakabikho ngokwemvelo, umzimba awukakulungeli. Njengomthetho, ukuphulwa kubangelwa yimisebenzi eminingi yesimiso sezinzwa zomama, kanti ngezinye izikhathi ingane, ngoba isimo se-placenta sincike kuso.
I-fetus ingase ingagcwaliseki ngokwanele, kodwa ukuzivikela kungase kungakulungeli, isibonelo, ukungabi namavithamini E, R, C, B. Kulesi simo, ingane iyokwakhiwa isikhathi esengeziwe, okuzoba pereshashivaniem.Suda kufanele ifake phakathi kokukhipha izisu ngaphambilini, izinkinga ngamafutha ukushintshaniswa, izifo ze-endocrine, izinkinga zengqondo noma ukuhlukunyezwa, izinkinga zesistimu yesini yesifazane, njll.
Ubuhle kuzo zonke izimo kuthinta, futhi ukukhulelwa akuyona into ehlukile. Uma emndenini womama ozayo kwakukhona abesifazane ababehamba, kungenzeka ukuthi lokhu kungenzeka manje futhi. Uma wenza ukuhlaziywa kwe-amniotic uketshezi negazi, khona-ke uma kunenkinga, ukungalingani kwe-hormone nezinqubo zamandla kuzoqinisekiswa.
Ngezinye izikhathi inkinga ilukhuni ngokulawulwa ngokweqile kwezokwelapha, okuholela ekuhloleni okufana nokungahlosi kwezinto eziphilayo. Lokhu kungabangelwa ukukhathazeka komama, ngokwesaba kuyobangela lo mzuzwana. Kulesi simo kunconywa ukuthi uqhube nezingxoxo zengqondo, noma usebenzise izikhuthazo.
Lesi sici sithatha isikhundla esikhethekile, ngokuvamile umama uzama ukubeletha, izizathu zingahluka, kaningi ziyancipha zibe nokukhathalela isimo somntwana, ukuyivikela, ukuyikhipha ngokuphelele, njll, futhi lena yinkinga yangempela. Ukwesaba kungabangela ukucindezeleka okunamandla komzimba we-uterine noma ukukhwehlela komlomo wesibeletho kungenzeka, kungase kubonakale ukuchotshozwa okusha nezinye izimpawu.
Ukuze uthole ukulungela okujwayelekile, kufanelekile ukuqala ukwenza lokho okwenze ngaphambilini; okunye ukuhamba, ukwenza izinto zokuzivocavoca, impilo esondelene kakhulu ivuselela ukubeletha, kungaba kuhle ukugibela.
Kunezinkolelo ezinjalo ezifihliwe ezingacaciswanga nhlobo futhi zivela kungenalutho, lapha kunconywa ukuthi uvakashele isazi sezengqondo noma uvakashele izifundo zokubeletha, lapho uzosizwa ngokunembile. Futhi, inkinga ingaba ukwehla okubukhali emisebenzini ngaphambi kokubeletha, uma kwenzeka ukuthi ukukhulelwa konke kusebenza kakhulu.
Ungaziqapheli njalo isimo sakho, ngaphandle kwalokho uzokhathala ngisho nangaphambi kokuzalwa, ngaphezu kwalokho, ukulawulwa kuyathinteka kakhulu ngokuzayo ngesikhathi. Uma ungashiyi imicabango enjalo, kufanelekile ukuzama ukushintshela ezintweni ezithakazelisayo noma ezibalulekile kuwe, kuze kulungiswe ikamelo labantwana kanye nokulungiswa okuncane kwezimonyo.
Ngezinye izikhathi ngesikhathi sokugcina, izihlobo zifudumala kakhulu ukufakwa kokukhathazeka nezinkolelo. Uma ukhathalela, khona-ke ukuzola, uhambe nge-ultrasound uphinde uthintane nodokotela ukuze uthole isiqiniseko, inkambo evamile yokukhulelwa kanye ne-fetus, vumela kube ngesonto eledlule.
Kubalulekile ukukhathazeka uma i-ultrasound ibonisa ukuthi ku-amniotic fluid kunezinhlayiya ze-meconial, futhi ingane inezinkinga nge-palpitation. Ngesikhathi sokukhathazeka, inqubo edingekayo ingenzeka ukuthi izonikeza umqondiso emzimbeni ekuqalisweni komsebenzi. Uma kungenjalo, uma kunzima kakhulu, kubalulekile ukubiza ngokubeletha ngokujwayelekile.
Ngezinye izikhathi kunzima kakhulu ukuma wedwa wedwa, lezi zinsuku zokugcina ziyesaba njalo, ngakho-ke kunconywa ukuba uhlangane nomndeni wakho, bashadile futhi mhlawumbe nabazali bakho bese wabelana nakho okuhlangenwe nakho kwakho. Ngokuvamile, ukuziphatha komyeni wakhe okungavumelani, ukwesaba nokungaqondi kahle isimo, kungakhuthaza inhlangano yowesifazane esimweni esifunekayo, okuzobe nomthelela omuhle ekuqaleni kokubhikisha futhi kuzoqala isenzo.
Thatha indawo ekhululekile futhi uphumule, emkhakheni wokubukwa ubeke ihora. Manje uphazamisa izingono ngomzuzu futhi izikhathi ezingu-5-6, igebe lingu-3minute. Ukubamba ukulwa, ubambe isandla sakho esiswini sakho.
Umphumela: umphumela omuhle uma lesi sibeletho sisebenzele imizuzu emithathu yokuqala, futhi emaminithini ayishumi kuyoba nokulwa okuningana (izikhathi ezingaba ngu-3). Uma wenza uvivinyo emavikini angu-40 bese uthola ukuhlolwa okungalungile, kungase kube kuhle ukuthi uzimisele ukuya perenashivaniyu. Endabeni yokuphendula ngokuphawulekayo kwesibeletho ekuvivinyweni komama, kodwa ukulethwa akukwenzeka, ungakhathazeki, ingane idinga isikhathi esithile futhi yena ngokwakhe uzokuzibiza ngokwakhe.
Ingozi yokukhululeka okukhulu
Izingane eziphathekayo zinekhono lokuvuthwa kakhulu kakhulu kunezingane ezivamile, ngakho-ke zinokuzwela okukhulu ukungabi khona kwe-oxygen. Lapha okuningi kuxhomeke ku-placenta, okumele inikeze i-oksijeni edingekayo, ngaphandle kwalokho isimo somntwana singakwazi ukuwohloka. Ngezinye izikhathi ubukhulu be-skull ngeke buvumelane ne-canal yokuzalwa futhi umama uzoba nokuhlukunyezwa kokubeletha. Ngenxa yokwelula ngokweqile, okuningi amniotic fluid kungabuthela ingane.
Ikhalenda lokukhulelwa: amaviki angu-31
Ukukhulelwa kwe-Ectopic. Kubangela, ukuxilongwa
Ngingaya endlini yokugeza ekhulelwe?
Ukuvimbela nokwelashwa kwe-acne ngesikhathi sokukhulelwa
Indlela yokwandisa ukwethembeka emsebenzini emva kwenhlebo
Imifino enezinyosi nelamula, amakhambi kanye nebhotela
Udon nge-shrimps nemifino
Ukudla kanye nezithasiselo eziphilayo ezisebenzayo
I-Anatomy yabantu: Uhlelo Lymphatic
Inhlangano yokuhamba nabantwana beminyaka yobudala